Abu Qataada Al-Falstiini oo xabsiga laga sii daayey (Daawo) | Radiohalgan.net
Abu Qataada Al-Falstiini oo xabsiga laga sii daayey (Daawo)
Urdun:-Maxkamad ku taal dalka Urdun ayaa waxay maanta xabsiga ka sii daysay Cumar Maxamuud Cismaan oo loo yaqaan Abu Qataada Al-Falastiini oo ka mid ah wadaada aad ula dhacsanaa Fikirka Takfiirka waxaana uu caan ku ahaa Fatwooyinkii uu siin jiray kooxda Jamaaca Islaamiya oo leysay shacab iyo culumada badan.
Maxakamada ku taal dalka Urdun ayaa waxaa ay horey ugu eedeysay Abu Qataada Al-Falastiini in uu qeyb ka ahaa weerar lagu qaaday iskuul ku yaal dalka Urdun oo laga leeyahay dalka Mareykanka sanadkii 2000 waxaana isaga oo dalka ka maqan lagu xukumay xabsi daa,in.
Abu Qataada Al-Falastiini ayaa waxaa laga soo masaafuriyay Britain 2013-kii ka dib markii ay codsatay dowlada Urdun.Garsoorayaasha Maxkamada la saaray Abu Qataada ayaa sheegay in ay wax danbi ah ku waayeen sidaa darteedna la siidaayey.
Abu Qataada Al-Falastiinii ayaa intii uu ku jiray xabsi ku yaal dalka Urdun waxaa uu weerar ku qaaday kooxda Khawaarijta ee Daacish isaga oo ku sifeeyey in ay yihiin Eeyaha Naarta waxaana uu qoray qormooyin kala duwan oo horey loogu faafiyey Halgan.net Halkan ka Eeg
Abu Qataada ayaa waxaa uu markii uu ka soo baxay Maxkamada u mahad celiyey dhamaan cid walba oo ka qeyb qaadatay soo deyntiisa gaar ahaan looyaradii isigu jiray Urduniyiin iyo Britain kuwaas oo qeyb ka qaatay soo deyntiisa.
Hoos ka Daawo Abu Qataada Al-Falastiini oo xabsiga ku yaal dalka Urdun laga sii daayey